Gawaarida hore iyo gadaal ka xiran.
Ma jiraan noocyo badan oo ka mid ah muraayadaha hore ee qorraxda, guud ahaan waxaa jira laba nooc oo aluminium ah iyo dhar aan tolnayn. Duubka aluminiumku guud ahaan wuxuu u qaybsan yahay nooca "board light" caadiga ah iyo nooca qaabka. Cabbirku guud ahaan waa 60 * 130cm, kaas oo ku habboon inta badan baabuurta yaryar. Macalimiinta...
Istaraatiijiyada ilaalinta qorraxda ee baabuur wadista xagaaga
by admin 23-06-21
Xagaaga waa tijaabo aad u weyn oo loogu talagalay baabuurka, cimilo heerkul sare oo joogto ah way fududahay in ay waxyeelo u geysato baabuurka iyo mulkiilaha, markaa sidee loo siinayaa muraayadda qorraxda ee gaariga? Baabuurka qorrax-mareenka Xilliga xagaaga, diyaari dhowr hadh-yaal qorrax leh si aad si wax ku ool ah u go'doomiso kulaylka baabuurka. Waxaa jira ma...
Sidee looga ilaalin karaa baabuurka qoraxda kulul?
Deegaanka baahida baabuur ee maanta, waxaan aaminsanahay in qof walba uu la kulmay dareenka gelitaanka baabuurka marka cimiladu kulushahay. Waxay la mid tahay xidhashada jaakad cudbi ah oo lagu galo saunada. Aad uma badna. Deegaankan oo kale, waa inaad u adkaysataa ma aha oo kaliya heerka sare ...
Filimka daaqada ayaa “ka dhigi kara fuulistaada mid caqli badan” oo maqaarkaaga iyo indhahaaga ka ilaalin kara qorraxda
Washington, Juun 21, 2021/PRNewswire/ - Tignoolajiyada heerka badan ee loo isticmaalo soo saarista iyo rakibida xirfada leh ee filimaanta daaqada baabuurta ayaa laga yaabaa inay "ka dhigi karto raacidaada mid caqli badan©", sida muraayadaha baabuurta caadiga ah, haddii lagu bixiyo SUVs, xamuul ama baabuurta. Sida laga soo xigtay Int...